GV Face: Aorian’ny Ady Efa Maherin’ny Dimampolo Taona, Msaina Lalina Ny Dikan’ny Fandriampahalemana ry Zareo Kolombiàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2016 2:57 GMT
(Fanamarihana. Tamin'ny 2 Oktobra 2016 no nivoaka voalohany tamin'ny teny Anglisy ity lahatsoratra ity)
Ankehitriny, miandry ny fitsapankevi-bahoaka manan-tantara i Kolombia, izay mety hanisy tsipika ny fifandirana mitam-piadiana mahatsiravina izay nangeja ny tantaran'ny firenena efa maherin'ny 50 taona, teo amin'ny governemanta sy ny vondrona Hery Revolisionera Mitam-piadian'i Kolombia (FARC).
Ny 2 Oktobra 2016, hifidy ireo Kolombiana ao anatiny sy ivelan'ny firenena, raha hanaiky na handà ilay fifanekena teo amin'ny governemanta sy ny FARC izay tokony hitondra fitsaharana amin'ny herisetra nandripaka aina mihoatra ny 200.000 isa. Lasa adihevitra be eny amin'ny vahoaka ilay fizotry ny fifanarahana naharitra ela, izay maneho fivakisana maharitra tao anatin'ny fiarahamonina Kolombiàna.
Ahoana no nahatongavantsika teto? Ahoana no nahafahan'ny firenena niodina hatrizay ela izay teo amban'ireo fepetran'ny ady, ary ahoana ny vokatry ny ady teo amin'ny fomba fisainan'ireo Kolombiàna? Ahoana io fizotry ny filaminana ankehitriny ao Kolombia io raha oharina amin'ireo hafa maneran-tany? Inona no ho dikan'ny vokatry ny fitsapankevi-bahoaka ho avy izao amin'ny ho avin'i Kolombia? Ahoana no hahafahana manefy ireo tanjona iombonana sy làlana hirosoana amin'ny ho avy aorian'ny ady?
Nojerenanay ireo fanontaniana rehetra ireo ao amin'ny resadresaka mafana noarahana tamin'i Robert Valencia, Mpanoratry ny Global Voices, mpamakafaka ara-politika sy National Urban Fellow; Diego Osorio, mpanoro hevitra, mpanolo-kevitra sy mpikaroka ao amin'ny Raoul-Dandurand Chair amin'ny Fikarohana Stratejika sy Diplomatika ao amin'ny Oniversiten'i Quebec ao Montréal ary i Andrés Lombana-Bermúdez, mpikaroka sy mpamorona endrika ao amin'ny Ivontoerana Berkman Klein ho an'ny Aterineto sy Fiarahamoniana ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard.
Raha miresaka mikasika ny fifandisoan-kevitra sy fametahana kisarisary matetika amin'ny FARC — mpitolona avy amin'ny vondrona elatra havia najoro tamin'ny 1964 — sy ireo vondrona mpikirakira zavamahadomelina izay nahatonga fahasimbàna goavana teo amin'ny firenena, namaly izao i Robert Valencia:
Fanenjanana mafimafy ihany ny fampitahàna ny FARC amin'ireo vondrona Meksikana mpikirakira zavamahadomelina, noho ny antony iray lehibe. Hatramin'ny fiantombohan'ny FARC, nanana tanjona ara-politika izy ireo. Ireo vondrona Meksikana mpikirakira zavamahadomelina indray tsy manana tanjona ara-politika, ny hahazo vola ihany ny hany tanjony.
Nanampy izao i Andrés Lomaba-Bermúdez:
Ireo fampitahàna ireo, ny amin'ny FARC sy ny vondrona mpikirakira zavamahadomelina, dia tonga taorian'ny fivoaran'ny FARC, ny tena marina satria lasa naharitra be ilay ady tany Kolombia tamin'ny resaka trafikanà zavamahadomelina, ary niseho ny taona 1980 izany. Noho izany, ireo mpamboly niezaka niady ho afaka mandray anjara amin'ny resaka politika, sy ny fizaràzarana ny tany no niandohany […] fa tamin'ny taona 80, ny fikirakiràna zavamahadomelina, amin'ny naha zava-baovao nalaza erantany azy no tafiditra teto amin'ny firenena, lasa nahazo toerana lehibe sy nivoatra be, tsy tamin'ny fambolena na famokarana zavamahadomelina ihany, fa ihany koa ny fanorenana toeram-pikarohana.
Nanome ny zavatra hitany ihany koa ireo hafa mpanoratry ny Global Voices . Nilaza izao i Cati Restrepo:
Ao amin'ny faritra iasako, milaza ireo olona sasany fa hikimpy ry zareo hifidy ny “eny”. Fa any Medellin, olona maro no miteny fa hifidy ny “tsia”. Io no fizaràna ara-paritra lazaiko. Ireo faritra sasany milaza fa fivarotam-pirenena ny vato manaiky ilay fifanarahana.
Misy hevitra iray hoe raha toa ianao mifidy ny eny, ho “guerrilla” (mpiady anaty akata) no ho filoha manaraka eo, satria ny ampahan'ilay fifanekena dia manome azy ireo toerana ao amin'ny Kaongresy.
Mikasika ilay fifanekena indray, mahita izao i Robert Valencia:
Tsy singan-taratasy nosoniavina fotsiny iny fifanekena natao sonia omaly iny. Ny ho lasa mahay mandefitra izao no fanamby goavana ho an'ireo Kolombiàna maro ankehitriny. Ho afaka mahazo tsara fa misy fiarahamonina maro izay samy manana hevitra samihafa ny tsirairay, ary eny, tafiditra amin'izany ireo avy amin'ny FARC.
Raha nanipika izao i Daniel Osorio:
Tsy fandresena ara-tafika io, fa fifanarahana.[…] Milaza ireo olona any amin'ireo faritra sasany ao Kolombia hoe: nahoana ary ry zareo [FARC] no tsy mangataka famelàna tsotra fotsiny? Nahoana izy ireo no mahazo io zavatra io ? Satria isika mandresy lahatra azy ireo hivoaka any an-tendrombohitra sy ho lasa manana anjara ao amin'ny dingana ara-politika. Raha tsy izany ho terenareo izy ireo, ary hiampy ady 20 taona indray izany.
Ho eritreritra farany, nanampy izao i Osorio:
Ito ihany no hany tranga hitako hoe làlan-tokana ihany no azo ivoahana. Efa nahita karazany maro aho [dingana ho amin'ny fandriampahalemana] izay ny tsara indrindra fotsiny amin'ny ankapobeny dia ny fitazonana ny marary ho velona fotsiny ihany. Afaka mandeha ivelan'ny hopitaly fotsiny io marary io, raha miaraka manao ny ataony Kolombiàna. Ny olana fototra amin'ny toe-draharaha any Kolombia dia ny tsy fisian'ny fahatokisana intsony ary ny tsy fahafahan'izy ireo mikarakara zavatra samirery. […] Afaka apetraka tsara ny fandriampahalemana, ary voaporofo izany satria raha oharinao amin'ireo toerana hafa io, ho hitanao ireo fepetra rehetra hampipetraka io tokoa ao Kolombia, satria manana fahafahana ireo Kolombiàna, satria manao izay hampisy io fandriampahalemana io ireo Kolombiàna, ary satria efa tena mifanantona akaiky tokoa ireo Kolombiàna, ka ho hadalàna raha tsy [andeha amin'io].
2 herinandro izayHehy